Home » Toerana fitsangatsanganana » Honduras dia mitaona ny mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny fampielezan-kevitra fizahan-tany vaovao
Nanambara ny Ivon-toerana momba ny fizahantany Honduras (IHT) androany ny fanentanana fizahan-tany vaovao indrindra izay mampiseho ny fahasamihafana betsaka eto amin'ny firenena ary izay rehetra atolotry ny mpizahatany iraisam-pirenena ho hitany. Manasongadina horonantsary maharitra roa minitra mitondra mpandeha amin'ny dia mankamin'ny harena tsara indrindra ao Honduras, ny fanentanana dizitaly dia mikasa ny hampisondrotra ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy hampianarana ireo mety ho mpandeha amin'ny traikefa maro voatanisa izay mety ho hitany ao amin'ny firenena.
Ny fananana miavaka indrindra tamin'ny fampielezan-kevitra, horonantsary namboarina sy natontan'ny masoivoho Saatchi & Saatchi, dia manaraka ny tovolahy iray antsoina hoe Henry izay nitsidika an'i Honduras tany am-boalohany mba hilentika any amin'ny Nosy Bay malaza ao amin'ny firenena. Avy eo dia nampahafantatra azy ny lava-bato tao Honduras ny mpiara-miasa aminy antsitrika ary nanomboka ny dia tsy nijanona nanerana ny firenena i Henry, mahatsapa fa misy zavatra bebe kokoa hita. Mitsidika ireo mari-pamantarana marika indrindra eto amin'ny firenena izy ary mihaona amin'ireo olona mandray azy avy eo izay mampahafantatra azy ny toerana halehany Honduran manaraka. Manomboka amin'ny fisakafoanana vao avy niotrika, namboly kafe tany Marcala i Honduran ary nitety ny Copins Ruins, hatrany amin'ny ziplining amin'ny La Campa ary ny fijerena vorona any amin'ny Reserve Biospera Río Plátano, dia nanandrana nanao izany rehetra izany i Henry. Ary nony farany, rehefa niondrana an-tsambo hiverina tany an-trano izy ary faly tamin'ny fiheverana fa efa nitety an'i Honduras rehetra izy, dia nampahatsiahy an'i Henry ny mpikarakara ny sidina fa mbola misy zavatra hafa azo jerena. Nanapa-kevitra ny hijanona ao Honduras izy fa hiaina izany amin'ny fomba feno, noho izany ny lohatenin'ny fampielezan-kevitra “Tsy Afaka Mandao an'i Honduras ianao raha tsy mahafantatra an'i Honduras.”
“Ny fanentanana farany nataonay dia natao hanehoana manerantany an'i Honduras amin'ny hatsarany sy ny famirapiratany rehetra. Mirehareha amin'ny zava-misy marina ny firenentsika isaky ny toerana, ary ity horonantsary ity dia manolotra fampisehoana mibaribary amin'ny fahitana ireo zava-mahagaga tsy fantatra miandry ny hitan'ny mpandeha, "hoy ny talen'ny talen'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany Honduras, Emilio Silvestri. "Matoky izahay fa amin'ny alàlan'ity fampielezan-kevitra ity dia hanohy handanjalanja ny sehatry ny fizahan-tany any Honduras izahay, ary hampanalavitra antsika lavitra amin'ireo toerana hafa mifanila aminy."
Ny fanentanana fizahan-tany vaovao dia hapetraka amin'ny alàlan'ny media sosialy sy amin'ny alàlan'ny ezaka amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, mikendry ireo mpihaino any Amerika Avaratra, Amerika Afovoany ary ny tsena eropeana voafantina.